Korea Cars နှင့်ပတ်သတ်လာလျှင်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုမျာ... | CarsDB
Korea Cars နှင့်ပတ်သတ်လာလျှင်အကောင်းဆုံး...
Korea Cars နှင့်ပတ်သတ်လာလျှင်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနေသော BR Global
BR Globle သည် Korea နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော ကားမျိုးစုံကို လက်လီ/ လက်က္ကား ရောင်းချပေးလျက် ရှိသည့်အပြင် အရည်အသွေးမြင့် ကောင်းမွန်သော ကားများကိုသာ တိုက်ရိုက်တင်သွင်ြး့ပီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဂီယာဘောက်စ် ပိုင်းဆိုင်ရာ တို့အား(၃)လအာမခံ ပေးခြင်းဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါသည်။
၎င်းအပြင် ကားနှင့်ပတ်သတ်သော ကားအပိုပစ္စှည်းများကို တိုက်ရိုက်တင်သွင်းထားပြီး Korea နိုင်ငံမှ ကျွမ်းကျင် အင်ဂျင်နီယာများမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိပါသည်။
Korea နိုင်ငံထုတ် အရည်အသွေးမြင့်ကားများ ဖြစ်သော-
Porter(II) -1 ton Truck (Long Body)
Porter(II) -Double Cab
Porter(II) -Wing Body
Libero -1 ton Truck (Box,Ice Box,Wing Body)
GRX Starex3Van~ 12 Sit (2004-2007) Auto/ Manual
Grand Startex3Van~12 Sit (2008~)Auto/Manual
Country Mini Bus -25 Sit
Bango (III) -1 ton
Bongo (III) -1.2 ton
Bongo (III) -1.4 ton
ကားများအားလုံးကို ဝယ်သူစိတ်ကြိုက်မည်သည့် အရောင်အသွေးမဆို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ကားတန်ဖိုးဈေးနှုန်း၏ ၇၀% ပေးချေပြီး ကျန်၃၀% ကိုအရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဘဏ်တိုးနှုန်းယူခြင်းမရှိ၊ မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုမျှ အပေါင်ယူထားခြင်းမရှိဘဲ ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာကတော့ -No.(6/7),R2 (A1) Street ,Mingalardon Industrial Zone ,Near Aung Mingalar Township ,Yangon
Tel : 09 4500 05057, 09 421136965, 09 4280 19573
BR Globle သညျ Korea နိုငျငံမှ တငျသှငျးသော ကားမြိုးစုံကို လကျလီ/ လကျက်ကား ရောငျးခပြေးလကျြ ရှိသညျ့အပွငျ အရညျအသှေးမွငျ့ ကောငျးမှနျသော ကားမြားကိုသာ တိုကျရိုကျတငျသှငျွ့းပီး စကျပိုငျးဆိုငျရာနှငျ့ ဂီယာဘောကျဈ ပိုငျးဆိုငျရာ တို့အား(၃)လအာမခံ ပေးခွငျးဖွငျ့ ရောငျးခပြေးနပေါသညျ။
၎င်းငျးအပွငျ ကားနှငျ့ပတျသတျသော ကားအပိုပစ်ှစညျးမြားကို တိုကျရိုကျတငျသှငျးထားပွီး Korea နိုငျငံမှ ကြှမျးက ငျြ အငျဂငျြနီယာမြားမှ ဝနျဆောငျမှုပေးလ ကျြ ရှိပါသညျ။
Korea နိုငျငံထုတျ အရညျအသှေးမွငျ့ကားမြား ဖွဈသော-
ကားမြားအားလုံးကို ဝယျသူစိတျကွိုကျမညျသညျ့ အရောငျအသှေးမဆို ဝယျယူနိုငျပါသညျ။
ကားတနျဖိုးစေြးနှုနျး၏ ၇ဝ% ပေးခေ ပြွီး က နျြ၃ဝ% ကိုအရဈက စြနဈဖွငျ့ ဘဏျတိုးနှုနျးယူခွငျးမရှိ၊ မညျသညျ့ပိုငျဆိုငျမှုမြှ အပေါငျယူထားခွငျးမရှိဘဲ ရောငျးခ ပြေးလကျြရှိပါသညျ။
ဆကျသှယျရနျလိပျစာကတော့ -No.(6/7),R2 (A1) Street ,Mingalardon Industrial Zone ,Near Aung Mingalar Township ,Yangon
Posted at: 03-07-2014 11:10 AM